Sida loo beddelo sanduuqa Gmail ee ku yaal Android | Androidsis
Sida loo beddelo nooca sanduuqa ee Gmail
Eder Ferreno | | Codsiyada Android, Tababarada
Gmail waa barnaamijka emailka ugu caansan maxaa maanta ku jira Android. In kasta oo beddelaadyo badan ay soo baxeen waqti ka dib. Noocyadeeda taleefanka, sanduuqa waxaa loo soo bandhigaa hab cayiman. In kasta oo adeegsadayaashu had iyo jeer leeyihiin suurtagalnimada inay isbeddel ku sameeyaan arrintan.
Tani waxay u sahlaysaa dadka isticmaala inay go'aamiyaan sida ay rabaan sanduuqooda sanduuqa ku jira Gmail telefoonkaaga Android. Isbeddel aad u fudud in la fuliyo, maxaa yeelay waxaa jira dhowr tallaabo oo lagu fulinayo qalabka.
Gudaha barnaamijka Gmail ee taleefanka, waa inaad furtaa menu-ga isku mid ah. Tani waa wax lagu guuleysto adigoo gujinaya saddexda xarig ee jiifka ah qeybta kore ee bidix ee shaashadda. Xulashooyin taxane ah ayaa markaa soo bixi doona. Waa inaad tagtaa goobaha, taas oo ah mid ka mid ah kuwa ku jira dhamaadka.
Markaad gasho goobahaan, dhowr ikhtiyaar ayaa la siiyaa (goobaha guud, dejinta koontada ama magaca koontadaada emaylka). Xaaladdan oo kale waa inaad gujisaa magaca koontadaada. Marka waxaad markaa marin u heli kartaa dejinta koontadaada taleefanka. Halkan waa inaad fiirisaa qaybta labaad.
Tani waa qaybta sanduuqa, halka qaybta hore loogu yeedho nooca sanduuqa. Dhagsii oo dhowr ikhtiyaar ayaa ka muuqda shaashadda. Gmail wuxuu noo ogolaanayaa inaan doorano nooca sanduuqa ee aan dooneyno inaan ku haysano barnaamijka. Hab loo habeeyo isticmaalkiisa Android. Waxaan markaa dooraneynaa midka aan dooneyno.
Marka nooca sanduuqa la xusho, hadda waa suurtagal in laga baxo dejintan. Markaad markale gasho Gmail, sanduuqa Waxaa loo abaabuli doonaa sidii aad codsatay. Way fududahay in nooca noocan ah laga beddelo barnaamijka. Waa la samayn karaa markasta oo aad rabto.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Sida loo beddelo nooca sanduuqa ee Gmail
Sawirro sifeysan iyo astaamaha Samsung Galaxy Watch Firfircoon
Google Play ayaa ku ogeysiin doona barnaamijyada tayada leh